Tontolo mitondra fiainana
Fa isaorana anie Andriamanitra, Izy mitondra anay mandrakariva ao amin’i Kristy toy ny fanaon’izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana Azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitr’i Kristy ho an’Andriamanitra izahay amin’izay hovonjena sy izay ho very. 2 Kor. 2:14,15
Tamin’ny fanomezana tsy azo ampitahaina ny Zanany Lahitokana no nampihodidinan’Andriamanitra ho eto amin’ity izao tontolo izao ity ny rivo-pahasoavany izay tena zava-misy tahaka ny fisian’ny rivotra mitsoka manodidina ny bolan-tany. Ireo rehetra misafidy ny hifoka izany rivotra mamelombelona izany no ho velona sy hitombo amin’ny fanatrarana ny ohatry ny fahalehibeazan’ny lehilahy sy vehivavy ao amin’i Jesosy Kristy.
Tsy azo ampitahaina amin’ny fahatsaran’ny zava-kanto rehetra ny fahatsaran’ny toe-po sy ny toetsaina hita ao amin’ireo olona natao haneho an’i Kristy. Rivo-pahasoavana izay mihodidina ny fanahin’ny mpino izany, dia ny fanahy Masina izay miasa ao am-po sy ao an-tsaina , ary mamboatra azy ireo ho tonga hanitry ny fiainana ho amin’ny fiainana, ka mamela an’Andriamanitra hitahy ny fiainany.
Ny fiovan’ny toetra no fijoroana ho vavolombelona ho an’izao tontolo izao ny amin’ny fitoeran’ny fitiavan’i Kristy. Miandry ny olony haneho Andriamanitra fa ny herim-pahasoavana manavotra dia afaka miasa ao amin’ny toetra misy kilema ka mamboatra azy hitombo ao anaty firindrana ary hamokatra amin’ny fahafenoany.
Rehefa manjaka ny fahasoavn’Andriamanitra, dia ho voahodidina rivotry ny finoana sy herim-po ary fanafahna ny fitiavan’i Kristy ny fanahy, rivotra mamelombelona ny fiainana ara-panahy ho an’ireo izay mifoka azy izany rivotra izany. Ireo izay manana fo manetry tena no ampiasain’Andriamanitra hanatratra ireo fanahy izay tsy ho azon’ireo mpitandrina voahosotra hatonina. Ho voahetsika hilaza teny manambara ny fahasoavana mamonjin’i Kristy izy ireo.
Ary amin’ny fitahiana ny hafa no handraisan’izy ireo fitahiana ihany koa. Nomen’Andriamanitra antsika ny fahafahana hizara fahasoavana, mba hahafahany mameno antsika amin’ny fahasoavana mitombo mandrakariva. Hohatanjahina ny fanantenana sy finoan’ireo izay manao ny asan’Andriamanitra miaraka amin’ny talenta sy ny fahafaha-manao nomen’Andriamanitra azy. Hiara-miasa aminy ny tafiky ny lanitra.
Tokony handroso ho eo amin’izao tontolo izao ny hery masina miasa mangina avy amin’ireo izay nohamasinina tamin’ny fahamarinana. Tokony hodidinina amin’ny rivo-pahasoavana ny tany. Tokony hiasa amin’ny fon’ny olombelona ny Fanahy MAsina handray ny zavatra momba an’Andriamanitra ary haneho izany amin’ny olona.